ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Michael Michalak အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း MYPOL မှ Dr. Albrecht Schnabel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် National Democratic Institute (NDI) ၏ ကနေဒါနိုင်ငံမှ ပညာရှင် Mr. Gerard Latulippe အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသူရထွန်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝါရင့် ကျွမ်းကျင်သူ Mr. Martin Fodor ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
eMail Security and Maintenance လုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
(ဂ)-ဦးရာဇ်မင်္ဂလာပန်းခြံနှင့်‌ ကလေးကစားကွင်းဟောင်း နေရာတွင် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်မှ မြေနေရာငှားထားသော နေရာတို့ကို ချန်လှပ်၍ ကျန်မြေနေရာလွတ်များကို ဦးရာဇ်မင်္ဂလာ ကလေးကစားကွင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့်‌ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Dec 12, 2018/
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်
(ဃ)-၂၀၁၃ မှ ၁၈ အတွင်း အင်တာနက်အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေး လုပ်ငန်းလိုင်စင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားလာသည့် အမှုပေါင်းမည်မျှ ရှိသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(က)-ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ကြက်တကောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် နယ်မြေရဲကင်းစခန်းငယ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ (၁၁.၁၂. ၂၁၀၈) 11/12/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ (၁၂.၁၂. ၂၁၀၈) 12/12/18
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ (၁၂.၁၂. ၂၁၀၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ (၁၁.၁၂. ၂၁၀၈)